ယနေ့ခေတ်မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းပေးသင့်လဲ ? – MyStyle Myanmar
ယနေ့ခေတ်မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းပေးသင့်လဲ ?
မိဘတိုင်းဟာ သားသမီးတွေ ထူးချွန်ထက်မြတ်တာကိုပဲ အမြဲမြင်ချင်သူတွေပါ။ မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားဘဲ မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ မာတာမိခင်နှင့် တစ်သက်လုံးမညည်းမညူ ရှာဖွေကျွေးမွေးတဲ့ဖခင်တွေဟာ သားသမီးတွေအပေါ်မျှော်လင့်ချက်တွေ အများကြီးထားတတ်ကြပါတယ်။ တိုးတတ်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကလေးတွေဟာ ပျက်စီးဖို့လမ်းစတွေ ပိုများလာပါတယ်။
(၁) ကလေးတွေကို စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထ ထူထောင်ပေးပါ။
ကလေးတွေကို ခေတ်မှီဖို့ ဖုန်းတွေဝယ်ပေးမယ့်အစား သူ့အသက်အရွယ်နှင့်လိုက်ဖက်မယ့် စာအုပ်တွေဝယ်ပေးပါ။ စာအုပ်တွေဟာ သင့်ကလေးရဲ့ စဉ်စားဆင်ခြင်ဉာဏ်နှင့် အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်စွမ်းကို မြင့်မားစေပါတယ်။ သင့်ကလေးတွေက စာမဖတ်တတ်သေးတဲ့အရွယ်ဆိုလည်း သူကို ပုံပြင်တွေ များများပြောပြပေးပြီး စာအုပ်တွေကို ငယ်ငယ်ထဲကချစ်တတ်အောင် သင်ပေးပါ။
(၂) ကလေးတွေကို မဆူပါနှင့်။
ကလေးတွေ အမှားလုပ်မိတယ့်အခါ သူတို့ကို ဒေါသထွက်ပြီး အော်မိတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိမှာပါ။ ကလေးတွေကိုဆူမယ့်အစား သူတို့ကို အကျိုးအကြောင်းနားလည်အောင် အရင်ရှင်းပြပါ။
(၃) သူတို့ဝါသနာကို မြေတောင်မြှောက်ပေးပါ။
ကလေးတိုင်းမှာ မွေးရာပါ Talent ဝါသနာတွေပါပါတယ်။ ထိုဝါသနာတွေကို သင့်အနေနဲ့ မချုပ်ချယ်ဘဲ မြေတောင်မြှောက်အားပေးပါ။ သူတို့ဝါသနာကိုအခြေခံတဲ့ Professional တွေဖြစ်အောင်ကူညီပေးပါ။
(၄) ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်အောင် သင်ကြားပေးပါ။
ကလေးတွေအနေနဲ့ အရာရာကို မိဘတွေအကူအညီယူနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းတွေ လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကို တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချခိုင်းပြီး ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးတတ်တဲ့ အလေ့အထထူထောင်ပေးပါ။
(၅) သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို အလေးထားပေးပါ။
ငါမိဘဆိုပြီး မိမိခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းတင်လွန်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်မူတွေမလုပ်ပါနှင့်။ ကလေးတွေရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကိုလည်း အလေးထား ထည့်သွင်းစဉ်စားပေးပါ။
ကလေးတွေရဲ့အောင်မြင်မူတစ်ခုချင်းဆီကို ချီးမွမ်းပေးပါ။ ဒါမှသာ သူတို့ အနေနှင့် ချီးမြောက်မူကို သာယာကာ ထပ်မံကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာမှာပါ။
MyStyle Myanmar2020-07-11T16:23:58+06:30July 11th, 2020|ချစ်ခြင်းမေတ္တာ – Love, အထွေထွေ ဗဟုသုတ – General Knowledge|